को हुन् एक नं. प्रदेशका मूख्यमन्त्री राजेन्द्र राई - Samriddha Online
को हुन् एक नं. प्रदेशका मूख्यमन्त्री राजेन्द्र राई
समृद्ध अनलाईन १६ कार्तिक २०७८, मंगलवार १४:४५ मा प्रकाशित ( १ महिना अघि) १७४७४ पाठक संख्या
ओखलढुंगा, कात्तिक १६ गते । भोजपुर जिल्लाको षडानन्द नगरपालिकामा बुबा नरेन्द्रबहादुर राई र आमा धनकुमारी राईको कान्छो सन्तानको रुपमा ५१ वर्ष अघि वि.सं. २०२७ साल असार १५ गते जन्मिएका राजेन्द्र राई मंगलबार प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।
तत्कालिन किमलुङ गाविसमा जन्मिएका राई विद्यालय तहबाटै विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । विद्यालयमा अनेरास्ववियुमा सङ्गठित भएर राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गरेका राई ३७ वर्षदेखि अनवरत राजनीतिमा संलग्न रहँदै आएका छन् । २०४१ सालमा अनेरास्ववियुको स्कुल एकाइ कमिटीको सचिव भएर विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेका थिए राईले । विद्यालय तह मै राजनीति सुरु गरेका राईले वि.सं. २०४३ मा एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि काठमाडौंको रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा प्रवेश गरे । रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा पनि उहाँले विद्यार्थी राजनीतिलाई निरन्तरता दिए । त्यस क्रममा उनी २०४९ मा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको (स्ववियु) सभापति बन्न सफल भए ।
उनी अनेरास्वियुको केन्द्रीय सदस्य, सचिव, महासचिव हुँदै २०५७ सालमा पहिलो पटक र २०५९ सालमा दोस्रो पटक केन्द्रीय अध्यक्ष समेत बन्न सफल भए । उनी अध्यक्ष भएकै बेला देशभर अखिलले सबैभन्दा धेरै स्ववियुमा जित हासिल गरेको थियो । नेकपा एमालेले संवैधानिक राजतन्त्र भनिरहेकै बेला उनी नेतृत्वको अखिलको केन्द्रीय कमिटी र राष्ट्रिय सम्मेलनले गणतन्त्रमा जानुपर्ने माग अगाडि सारेको थियो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा विद्यार्थी आन्दोलनको अगुवाई गर्दै आन्दोलनमा होमिनुभएका राई नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशन पछि भने किनारामा परे । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा आएसँगै राई छाँयामा परेका थिए । नेकपा एमाले भित्रको गुटको राजनीतिले केही समय उनको गतिलाई रोक्न खोजे पनि उनले राजनीतिक यात्रालाई नयाँ ढंगले अघि बढाई रहे र प्रदेश १ को तेस्रो मुख्यमन्त्रीको रुपमा अहिले उनले जिम्मेवारी पाएका छन् ।
लामो समय अखिल राजनीतिमा सक्रिय रहनुभएका राई २०६८ सालमा केन्द्रीय सदस्य मनोनीत भएपछि पार्टी राजनीतिलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाए । उनि २०७१ सालमा सम्पन्न एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए । २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा राई प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त भएका थिए । २०७४ सालको आम निर्वाचनमा नेता राई भोजपुरबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भए ।
ओलीको गुटको राजनीतिका कारण उनि गुटमा भन्दा पनि जनताको सेवकका रुपमा काम गररहे । पछिल्लो समयमा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफु नजिकका नेताहरुलाई आफ्नो साथमा लिए संगै उनि माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एककिृत समाजवादी) को केन्द्रिय सचिव रहेका छन् । पञ्चायतकालमा सात महिना जेल जीवन बिताएका राई शाही शासनका विरुद्ध आन्दोलन गर्दा चार महिना प्रहरी हिरासतमा रहेका थिए । नेता राई राज्यबाट मात्र नभएर देशमा चलेको सशस्त्र आन्दोलनमा विद्रोही पक्षबाट पनि केही समय नियन्त्रित भएका थिए । २०६० सालमा जनयुद्धरत नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले उनलाई भोजपुरमा एक हप्ता नियन्त्रणमा राखेको थियो ।
राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका राईको सयौं लेख रचना विभन्न पत्रपत्रिकामा प्रशाकाशित भएका छन्। उनका तीन पुस्तक प्रकाशित छन् । उनको ‘विचारको खती’, ‘आयु’ नामक विद्यार्थी आन्दोलनसँग सम्बन्धित पुस्तक प्रकाशित छन्। शिक्षासम्बन्धी पुस्तक ‘शिक्षाको अँध्यारो’ नामक पुस्तक पनि प्रकाशित छ । राईले पोर्चुगल, डेनमार्ग, बेल्जियम, स्वीडेन, अल्जेरिया र भारत भ्रमण गरेका छन्।